2 headline goes here here here here here here | News24
2 headline goes here here here here here here
ISITHOMBE: sithunyelweAbanye bosomabhizinisi abahambele inkomfa yentsha kanye nabahleli bale nkomfa.
INTSHA yaseMgungundlovu ithole ithuba eliyingqayizivele ngesikhathi ilulekwa ngezamabhizini kwinkomfa yentsha ebise emtapweni wolwazi i-Bessie Head Library ngoMgqibelo mhla ziyi-16 kuNhlangulana (June).
Le nkomfa ebihlelwe inhlangano engenzi nzuzo i-Beyond Measure Foundation bekuhloswe ngayo ukukhuthaza intsha ukuba ingene emkhakheni wezamabhizinisi esikhundleni sokuba ihlale emakhaya ikhale ngokuthi imisebenzi ayikho.
Le nkomfa ebigxile kakhulu emikhakheni engajwayelekile okubalwa kuyona ezemikhumbi kanye nezolimo, ihehe abantu abaningi njengoba ibihanjelwe ngabafundi abasuka ezikoleni ezehlukene abebezofuna ukuthola ulwazi ngale mikhakha.
UNkk Nompumelelo Ndlela noyi-Economic Strategist kanye nomsunguli wenhlangano i-Success Way Foundation nobengomunye wezikhulumi kule nkomfa uthe indlela eya empumelelweni kwezamabhizini iqala ngokuthi umuntu abe necebo lalelo bhizinisi afuna ukuthi abe nalo liphinde libe impumelelo.
Uthe: “Sonke saqala singenalutho kodwa safunda saqhubeka kwaze kwaba siyaphumelela.
Okubalulekile ukuthi ube unecebo futhi siyakholelwa ekutheni wonke umuntu unecebo analo.
“Icebo iyona into ezokukhipha kuleso simo okusona njengamanje nofuna ukuphuma kusona.
“Zikhona vele izingqinamba kanye nezinto okumele uzenze kodwa nesixazululo kulezo zinkinga naso sikhona. Isixazululo sikhona sikuwena,” kubeka yena.
Uqhube wathi into abayifunayo ukuthi intsha ikhuthazeke kwezamabhizini emikhakheni eyahlukene.
“Kumele sibe nohlelo lapho sifaka khona intsha yethu ukuze sizokwazi ukuthi sibeke khona iso.
Sinezinga elikhulu kakhulu labantu abangasebenzi eNingizimu Afrika yingakho kubalulekile ukuthi nizivulele nina amathuba emisebenzi ningene nakwezamabhizinisi.”
UMnuz Thobekani Hlengwa we-Beyond Measure Foundation uthe bajabule kakhulu ngemiphumela yale nkomfa futhi sekuyinto abazoqhubeka bayenze njalo.
“Bekusayisiqalo lesi bekufana nokuthi siyethula ngokusemthethweni le nkomfa eseyizoba minyaka yonke kusukela manje.
“Kuningi esisafuna abantu abasha bakwazi uma kuza kwezamabhizinisi.
“Abantu abasha kumele bakwazi ukuheha abantu abazobaxhasa ngaphandle kokuthi bafunde i-business plan.
“Sifuna ukumema nezimboni ezahlukene ezizobachazela kabanzi ukuthi amabhizinisi anjani athola uxhaso,” kubeka yena.